लापरवाहीको हदः सुत्केरी गराउँदा डाक्टरले बच्चालाई जोडले ताने, २ टुक्रा भयो बच्चा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
लापरवाहीको हदः सुत्केरी गराउँदा डाक्टरले बच्चालाई जोडले ताने, २ टुक्रा भयो बच्चा
जैसलमेर। जैसलमेरको रामगढको सरकारी अस्पतालमा महिलालाई सुत्केरी गराउने क्रममा डाक्टरले बच्चालाई यति जोडले ताने कि बच्चा २ टुक्रा भयो । बच्चाको घाँटीसम्मको भाग त बाहिर आयो तर टाउको भित्रै रह्यो । डाक्टरहरुले सुत्केरी महिला र उनका परिवारलाई केही बताएनन् र महिलालाई जैसलमेर रिफर गरिदिए । जसलमेरबाट जोधपुर पठाइयो जहाँ सबै घटनाको खुलासा भयो ।